ဥေရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ဘီလီအတွက်အထူးရထားအားဖြင့်ခရီးသွားလာ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > ဥေရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ဘီလီအတွက်အထူးရထားအားဖြင့်ခရီးသွားလာ
စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ(နောက်ဆုံးတွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 21/02/2021)
ဥရောပခရီးစဉ်များတိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက်ရထားများတွင်ယူရို ၁၀၀ ဘီလီယံကျော်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် EU ကအဆိုပြုထားသည်, ဤသည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအများပြည်သူနှင့်ပုဂ္ဂလိကရန်ပုံငွေနှင့်အတူပေါင်းစပ်ပါလိမ့်မယ်. စုပေါင်း., စုစုပေါင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု€ 4.5 ဘီလီယံကိုကျော်လွန်ပါလိမ့်မယ်. အဆိုပါရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဟုခေါ်သောရန်ပုံငွေအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကတဆင့်လာကြလိမ့်မည် ဥရောပချိတ်ဆက်ခြင်း facility. တိုတိုပြောရရင်, အဆိုပါရန်ပုံငွေအနည်းငယ်အုပ်စုများထံမှလာကြလိမ့်မည်. ဒီအုပ်စုတွေအမျိုးသားရေးပါဝင်သည်, သီးသန့်ဖြစ်သည်, နှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဘဏ်များ.
ရန်ပုံငွေရှာခြင်းဥရောပခရီးသွားရထားလမ်းကွန်ယက်ကို upgrade ကူညီပေးပါမည်. လည်း, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖွံ့ဖြိုးကူညီပေးပါမည် ရထားများအတွက်အစားထိုးလောင်စာ options များ. ထို့အပြင်, အဆိုပါရန်ပုံငွေများအတွက်လမ်းခင်းပေးမည် သုည - ထုတ်လွှတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး.
စီမံကိန်းများဥရောပခရီးသွား၏အဓိကကွန်ယက်ကိုအာရုံစိုက်ပါလိမ့်မယ်. € 719,5 သန်းအဘို့ဖြစ်၏ ဥရောပရထားလမ်းကွန်ရက်တစ်ခု. € 99,6 သန်းလမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအဆင့်မြှင့်အဘို့ဖြစ်၏. လည်း, € 78,9 သန်းဆိပ်ကမ်းများဖွံ့ဖြိုးဘို့ဖြစ်၏. ထိုအ€ 44,7 သန်းကုန်းတွင်းပိုင်းရေလမ်းအဘို့ဖြစ်၏.
အဆိုပါရန်ပုံငွေကိုဖုံးလွှမ်းလိမ့်မည် flagship အစပျိုးပါဝင်သည်;
တိုးပွားလာသည့် ရထား၏မြန်နှုန်း ဒိန်းမတ်နှင့်အကြား ဂျာမနီ.
ထည့်သွင်းခြင်း 340 ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လျှပ်စစ်၏ဘူတာ charging ကားများ
ဥရောပခရီးသွားများအတွက်€ 37 ဘီလီယံ၏အပိုဆောင်းအီးယူရထားရန်ပုံငွေ
အချို့အဆိုအရ သတင်းရင်းမြစ်, ဥရောပရထားစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်တစ်ဦးအပိုဆောင်း€ 37 ဘီလီယံရင်းနှီးမြှပ်နှံထားပါတယ်. ဤငွေပမာဏကိုပိုပြီးလူတွေအလုပ်အကိုင်အခွင့်အများနှင့်ဝင်ငွေကိုပေးမည်. ဥရောပရထားလမ်းကွန်ယက်သည်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ရေရှည်တည်တံ့မှုတိုးမြှင့်မှုကြောင့်ဖြစ်သည်. ဤတွင်€ 37 ဘီလီယံအသုံးပြုသည်စီမံကိန်းတချို့ရှိနေပါတယ်;
ဒီဥမင်လိုဏ်ခေါင်းဖြစ်ပါတယ်နေစဉ် 17 အသက်အနှစ်, ဥရောပခရီးစဉ်အတွက်သာဖွင့်လှစ်ခဲ့သည် 2016. ယင်းကြောင့် alpine တောင်များ, ကြာသည် 2,400 မှတဆင့်တူးဖို့အလုပျသမား. အဆိုပါဥမင်လိုဏ်ခေါင်းရဲ့အရှည်နီးပါးဖြစ်ပါသည် 57 KM, ဒါဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးဆုံးဥမင်လိုဏ်ခေါင်းအောင်. အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း၏အရွယ်အစား၏, ကုန်ကျစရိတ်€ခဲ့သည် 11 ဘီလီယံအထိ.
ဤသည်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းချိတ်ဆက် မြောက်ပိုင်းအီတလီ ဥရောပခရီးသွားဂေဟစနစ်နှစ်ခုအရေးကြီးသောနိုင်ငံများဖြစ်သောတောင်ပိုင်းဂျာမနီနှင့်အတူ. အနာဂတ်မှာ, 240 ကုန်တင်ရထားကိုဤသုံးပါလိမ့်မယ် ပြွန်ခေါင်းလမ်း. အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း၏, အဆိုပါကုန်တင်ကျော်ကိုအစားထိုးပါလိမ့်မယ်2တစ်နှစ်လျှင်သန်းထရပ်ကားခရီး. ထရပ်ကားများတောင်ပေါ်သို့တက်မောင်းခြင်းနှင့်သေဆုံးသူစီတန်းအတွက်စောင့်ဆိုင်းရန်ရှိသည်. ရလဒ်အနေဖြင့်, အဆိုပါကုန်တင်, တစ်မပြတ်မတောက်မှာခရီးသွားလာတံ့သော 160 တစ်နာရီကို KM ပိုမိုနှစ်သက်ကြလိမ့်မည်.
2. Fehmarnbelt Link ကို
ဤသည် fixed link ကိုဥမင်လိုဏ်ခေါင်းကမ္ဘာ့အရှည်ဆုံးဗတ္တိဇံကိုဥမင်လိုဏ်ခေါင်းဖွစျလိမျ့မညျ. The tunnel will link Denmark with the German Island of Fehmarn. ဒီ link ကိုဥမင်လိုဏ်ခေါင်း၏စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်€7ဘီလီယံဖြစ်ပါတယ်. ဒီ link ကတော့ဖြတ်မည် ရထားခရီး အကြားအချိန် စတော့ဟုမ်း နှင့်ဟမ်းဘတ်အားဖြင့်2နာရီ. ဂျာမနီတို့အကြားအဆိုပါကုန်တင်စက်မှုလုပ်ငန်း, ဒိန်းမတ်, နှင့်ဆွီဒင်ဒီ link ကနေလွန်ကဲကဲရရှိခဲ့ပါပြီ, ဒီsurelyကန်အမှန်ဥရောပခရီးသွားမြှင့်တင်ရန်ပါလိမ့်မယ်.
3. ဥရောပခရီးသွားမီးရထားကွန်ယက်ချိတ်ဆက်မှုစီမံကိန်း VDE 8
VDE 8 ဖြစ်ကောင်းဂျာမဏီတွင်အကြီးဆုံးမီးရထားလမ်းဆောက်လုပ်ရေးဖြစ်ပါသည်. အဆိုပါစီမံကိန်းတွင်ဂျာမဏီကိုဖြတ်ပြီးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတိုးတက်ကောင်းမွန်. သောကြောင့်၎င်း၏အရွယ်အစားနှင့် နည်းပညာ အဆိုပါ VDE 8 ဘာလင်နှင့်အကြားလိုင်း မြူးနစ် € 10 ဘီလီယံကုန်ကျ.
လက်မှတ်စာအုပ်ထဲတွင်3မိနစ်များ
ရထားလက်မှတ် booking ဥရောပခရီးသွားဘို့အတွက်? အဘယ်ကြောင့်မယူ3သင့်ရဲ့လမ်းကြောင်းများအတွက်စျေးအသက်သာဆုံးလက်မှတ်တွေကိုရှာဖွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ site ပေါ်တွင်မိနစ်. ယခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ site ကိုမှ Login စာအုပ်ရထား. လက်မှတ်တွေမျိုးစုံနည်းလမ်းတွေထဲမှာအဘို့အပေးဆောင်နိုင်, အကောင်းဆုံးကတော့နှင့်ခရက်ဒစ်ကတ်များအပါအဝင်.
သင်သည်သင်၏ site ပေါ်တွင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, ထို့နောက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Feu-invest-1-billion-euros-european-travel%2F%3Flang%3Dmy - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)
သင်သည်သင်၏အသုံးပြုသူများမျိုးဖြစ်လိုလျှင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ရှာဖွေရေးစာမျက်နှာများသို့တိုက်ရိုက်သူတို့ကိုပဲ့ပြင်နိုင်ပါတယ်. ဒီလင့်ခ်, သင်တို့သည်ငါတို့၏လူကြိုက်အများဆုံးမီးရထားလမ်းကြောင်းများရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. သငျသညျအင်္ဂလိပ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများတွင်ဘို့ငါတို့လင့်များရှိအတွင်းပိုင်း, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/in_routes_sitemap.xml, သင် / ru သို့မဟုတ် / ja အတွက် / နှင့်အခြားဘာသာစကားများပြောင်းလဲနိုင်သည်.
#အခြေခံအဆောက်အဦများ #ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ europetravel ရထားခရီးသွား
သင်သည်တတ်နိုင်လျှင်ငါ့ကိုဘမ်းဆီးခြင်း, သငျတို့သကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်တစ်ဦးကရထားဘလော့၌ငါ့ကိုမတှေ့နိုငျပါလျှင် - သငျသညျဒီမှာနှိပ်ပါနိုင်ပါတယ် ငါ့ကိုဆက်သွယ်ပါ